Sida looga hortago cudurka macaanka: tilmaamaha kaa fogeynaya cudurkan | Ragga Stylish
Ma taqaanaa sida looga hortago cudurka macaanka? Tiro aad u tiro badan oo dadka ka mid ah ayaa la ildaran cudurka macaanka (qaar badan oo aan weli la ogaan), halka sidoo kale dad badan ayaa halis weyn ugu jira nooca 2aad ee sonkorowga, kan ugu badan.
Caadooyinkaaga ayaa kugu soo dhoweyn kara ama ka fogaan kara cudurkan, sidaa darteed isbadal kasta oo wanaagsan waa la xisaabtamaa. Laakiin maxaa la sameeyaa? Sidee looga hortagaa cudurka macaanka? Kuwa soo socdaa waa xeeladaha ugu wax ku oolka badan marka laga hadlayo ka hortagga cudurka macaanka.
1 Miisaan lumis
1.1 Si joogto ah u tababar
1.2 Waxa la sameeyo si miisaanku u yaraado
1.3 Kalori ka jar cuntadaada
2 Sida looga hortago sonkorowga cuntada
2.1 Qaado faybar badan
2.2 Cun badar ka sii badan
3 Xeelado badan oo ku saabsan cuntadaada
3.1 Sharad ku samee karbohaydraytyada caafimaadka qaba
3.2 Iska yaree dufanka buuxa
3.3 Yaree kolestaroolka
3.4 Cun kalluunka
4 Calaamadaha cudurka macaanka
Inaad culeyska iyo cayilku iska celiso waxay yareyn kartaa halista cudurka macaanka. Haddii aad u maleyneyso in caafimaadkaaga uu isticmaali karo xoogaa rodol ka yar, tixgeli inaad isku daydo talooyinka soo socda.
Si joogto ah u tababar
Way ka fiican tahay wax yar, dabcan, laakiin jimicsiga inuu saameyn weyn ku yeesho caafimaadka isla markaana hoos u dhigo halista cudurro badan, oo ay ku jiraan midka naga khuseeya munaasabaddan, kuma filna inaad jimicsiga tagto waqti ka waqti . Waxaad yareyn doontaa halista cudurka kaadi macaanka haddii aad jimicsi joogto ah sameyso, ugu yaraan 2.5 saacadood usbuucii.
Waxa la sameeyo si miisaanku u yaraado
Fiiri maqaalka: Sida loo dhimo miisaanka. Halkaas waxaad ka heli doontaa hage dhammaystiran, oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaqa jirka iyo cuntada. Waxay kaa caawin doontaa inaad lumiso miisaanka iyo, ka sii muhiimsan, inaadan dib u soo ceshan, maxaa yeelay kuwani waa caadooyin la sii hayn karo muddada dheer.
Kalori ka jar cuntadaada
Miisaanka oo yaraada wuxuu u baahan yahay gubida kalooriyo ka badan inta aad cunayso, iyo goynta kaloriintu waa mid ka mid ah xeeladaha kaa caawin doona inaad tan gaarto. Xakamee cabbirka qaybta oo hubi inaad cuntid khudaar kugu filan, koox cunto ah oo ku qancisa rabitaankaaga kalooriyo yar.
Sida looga hortago sonkorowga cuntada
Tixgeli cunista dufanka badan, kalluunka, iyo karbohaydraytyada caafimaadka qaba. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad yareyso dufanka buuxa iyo kuwa kalasta iyo kolestaroolka.
Qaado faybar badan
Dadka badankood ma helaan fiber ku filan, oo ah wax, haddii ay sidoo kale tahay kiiskaaga, waa inaad bedeshaa, wax badan. Fibre ayaa muhiim u ah caafimaadka wanaagsan. Haddii aad hubiso in kalooriyada ku jirta cuntadaada ay weheliso qadar fiican oo ah fiber (14 garaam ayaa lagula taliyaa 1.000 kiilo oo kasta) waxaad yareyn doontaa halista inaad ku xanuunsato cudurkan.
Cun badar ka sii badan
Sidee ayay badar ugu jirtaa cuntadaada? U beddelashada noocyada hadhuudhka ah rootiga caadiga ah, baastada, iyo badarka quraacda ah waxay kaa caawin kartaa kahortaga cudurka macaanka.
Xeelado badan oo ku saabsan cuntadaada
Ku dhajinta talooyinka kor ku xusan waa tallaabo weyn oo looga hortagayo cudurka macaanka, laakiin haddii aad rabto weli waad sameyn kartaa wax badan. Tilmaamaha soo socda ayaa loogu talagalay dadka horeyba looga helay cudurka macaanka, laakiin sidoo kale waxaa quseeya kuwa halista ugu jira:
Sharad ku samee karbohaydraytyada caafimaadka qaba
Cunnooyinka caafimaadka leh iyo noocyada kaladuwan waa inay ku jiraan wax walba qaybtooda caddaaladda, xitaa karbohaydraytyada, kuwaas oo inta badan loo tuuro inay yihiin sharwadayaal si aan caddaalad ahayn Waana inaanay dhammaan karbohaydraytyadu ahayn kalooriyeyaal aan lahayn wax intaa ka badan, laakiin sidoo kale waxaa jira miro, khudaar, miro dhan, digir, iyo caano dufan yar. Kuwani waa kaarbohaydraytyo caafimaad leh, oo aad muhiim ugu ah daaweynta iyo ka hortagga cudurka macaanka.
Iska yaree dufanka buuxa
Xaddididda qaadashada dufanka buuxa waa caano lagu celceliyo marar badan markay timaaddo helitaanka cunto caafimaad leh. Hadafku waa inuu ahaadaa in la yareeyo jiritaankooda illaa ay ka wakiil yihiin wax aan ka badnayn 7% dufanka aad qaadato maalin kasta. Marka ay timaado dufanka trans, ujeedku waa inuu ahaadaa mid hami badan leh: gebi ahaanba ka saar cuntada. Labadaba oo buuxa iyo trans, la-tashiga sumadaha alaabta ayaa kaa caawin doona inaad yareyso jiritaankooda iyo ka hortagga cudurrada iyo dhibaatooyinka ay la xiriiraan, sida sonkorowga iyo qaar kaloo badan.
Kalastaroolka ayaa ah qodob kale oo muhiim ah haddii aad halista sare ugu jirto sonkorowga ama aad rabto inaad si fudud u hagaajiso tayada cuntadaada. Laakiin sidee looga hortagi karaa cudurka macaanka iyada oo loo marayo kolestaroolka? Khubaradu waxay ka hadlaan 200 milligram maalintii sidii xad ahaan markay tahay sameynta cunto cadeyn u ah cudurka macaanka iyo cudurada kale.
Barootiinnada ku jira cuntooyin badan waxay ka yimaadaan inta badan gaar ahaan hilibka, laakiin shaqada waa in loo qaybiyaa dhowr kooxood oo cunno ah. Sababtoo ah waxay ka kooban yihiin fiber, digiraha ayaa ah xulasho weyn. Sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad kalluunka cunto ugu yaraan usbuucii laba jeer. Sidaad ogtahay, waxaa jira habab kala duwan oo kalluunka loo kariyo, mashiinka oo ah kan ugu yar ee lagu taliyo.
Calaamadaha cudurka macaanka
Sida ugu dhakhsaha badan ee lagu ogaado, way ka sii fiicantahay, markaa ballan ka sameyso dhakhtarkaaga haddii aad ka shakisan tahay inaad qabto sonkorow. Calaamadaha soo socda ayaa laga yaabaa inay sabab u yihiin sonkorowga:
Haraad iyo gaajo oo badatay
Kaadida oo badata
Aragga indha la '
Nabarro aan bogsan
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Sida looga hortago cudurka macaanka